यसरी छानिन्छन् राष्ट्रियसभा सांसद, राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले ४० सिट जित हात पार्ने देखियाे ! | नेपाली जनता :: Nepali Janta: Nepali News Portal
प्रकाशित मिति ३० पुष २०७४, आईतवार १०:०० लेखक नेपाली जनता
Post View Count: 67
तीन लघुवित्तको सवा ८ करोडको आइपीओ आउँदै
काठमाडौं । साधारण सेयर (आइपीओ)मा लगानी गर्न उत्सुक लगानीकर्ताहरुका लागि खुसीको खबर । निकट भविष्यमै तीन वटा लघुवित्त कम्पनीले…
सर्वोच्च अदालतमा बम नभएको प्रहरीको दाबी !
काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतभित्र बम नभएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। सर्वोच्व परिसर भित्र…
धनुषामा ट्याक्टरले किच्दा तीन बालिकाको मृत्यु
जनकपुर । धनुषामा ट्याक्टरले किच्दा तीन बालिकाको मृत्यु भएको छ । सडक छेउँमा शौच गर्न गएका बालिकाहरुलाई ट्याक्टरले किचेको…
खोटाङ । उत्तरी र दक्षिणी क्षेत्रमा लामो समयदेखि नमस्ते तथा स्काइ मोबाइल सेवा अवरुद्ध भएको छ ।
गोवामा कला महोत्सव नेपालको पनि सहभागिता
काठमाडौँ । भारतको गोवामा ‘सेरिन्डिपिटी आर्ट फेस्टिबल’सुरु भएको छ । उपमहाद्वीपीयस्तरको कलामा छनोट भई नेपालबाट कविराज लामा, किशोर कायस्थ र…
माओवादी केन्द्रमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरको प्रभाव ह्वात्तै बढ्यो, प्रचण्ड हेरेको हेर्यै
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रमा पछिल्लो समयमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरको प्रभाव…